Iran oo ku hanjabtay inay Xirayso Gacanka Hormuz • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Iran oo ku hanjabtay inay Xirayso Gacanka Hormuz
Maalin ka dib markii Madaxweynaha Marayknka Donuld Trump uu diiday inuu cusboonaysiiyo go’aankii Iiraan loogu ogolaanayay inuu shidaalkeeda u dhoofiso wadamada qaaarkood. ayaa taliyaha ciidamada bada ee dalkaasi wuxuu ku hanjabay inay xiri doonaan gacanka Horumuz.
Ciidamada Badda Maraykanka oo ku sugan Gacanka Hormus
Adimaral Alireza Tangsiri oo ah taliyaha ciidamada badda ee Kacaanka Iiraan ayaa hanjabaadan jeediyay mar uu waraysi siinayay Telefishanka afka carabiga ku hadla ee Al-alam.
” Shuruucda caalamiga ah marka la eego, Gacanta Hormus waa marin caalami ah, haddii khatar la galiyo danaha Iiraan, waxaan diyaar u nahay inaanu difaacano sharaftayada iyo xuquuqdayada, waxaan xiri doonaan gacanta Horumus” Sidaas waxaa yiri Gen Alireza Tangsiri
Donold Trump ayaa ka baxay heshiiskii Nukliyeerka ee la saxiixay 2015 ee u dhaxeeyey dalalka Awoodaleh iyo Iran, isla markaana uu soo saaray cunaqabateyn horleh oo lagu cadaadinayo wadankaasi .
Wadamada Shiinaha, Hindiya, Japan, Koonfurta kuuriya, Turkiga, Taiwan,, Talyaaniga iyo wadanka Giriiga ayaa Maraykanku hore ugu ogolaaday inay Saliida cayriin ka soo dhoofsadaan Wadanka Iiraan, iyadoo laga cabsi qabay khalkhal ku yimaada Suuqa Saliida aduunka.
Donuld Trump, waxaa uu sheegay in wadamada Sucuudiga iyo Imaraadku ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarka Shidaalka si loo daboolo baahiyaha suuqa ganacsiga ee Saliida marka gebi ahaanba la joojiyo Saliida Iiraan u iibgayso Adduunka bisha dambe ee May.
Gacan Badeedka Hormus
Dowladda Iiraan ayaa marar badan ku hanjabtay inay qaadayso tilaabooyin adag oo ay ku carqaladeenayaan guud ahaan ganacsiga shidaalka ee Bariga dhexe haddii loo diido inay shidaalkooda u iibgeeyaan Caalamka.
Qiimaha shidaalka cayrin ayaa kor u kacay iyadoo qiimaha fuustada shidaalka ay gaartay $74.31 dollar, taasi oo noqonaysa qiimihii u sareeyay tan bishii November ee sanadkii hore.
Gacan badeedka Horumuz oo ah mid muhiim oo kala qaybiya wadamada Iiraan, Cumaan iyo Imaraadka ayaa maalintii waxaa maray Maraakiib waaweyn oo sida in ka badan 18 Milyan oo fuusto oo shidaal ah, taasi oo ah Saddex meelood meel shidaalka adduunka laga isticmaalo.